चुनाव हार्दैछन् मोदी? - विचार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
विष्णु रिजाल काठमाडौं भदौ १८
फोटो कमल सिंह/पिटिआई
इन्डिया टुडे ग्रुपले हालै गरेको सर्वेक्षणले भाजपा गठबन्धनले २ सय ५५ र कांग्रेस गठबन्धनले २ सय ४८ सिट ल्याउने आँकडा देखाएको छ। यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने भाजपा र मोदीको लोकप्रियता निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
आठ महिनाभित्र हुन लागिरहेको भारतीय संसदको लोकसभाको निर्वाचन सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले हार्दैछ?
सन् २०१४ को १६ औँ लोकसभा निर्वाचन यताका घटनाक्रम, मतसर्वेक्षण, उपनिर्वाचन र जनताको रुझान हेर्दा २०१९ को अप्रिल–मे मा हुन गइरहेको १७ औँ लोकसभा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि ‘फलामको च्युरा’ सावित हुनेदेखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ५ सय ४३ सदस्यको निर्वाचनमा बहुमतका लागि २ सय ७२ सिट चाहिनेमा भाजपा एक्लैले २ सय ८२ सिट जितेको थियो भने उसले नेतृत्व गरेको राष्टिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले ३ सय ३६ स्थान जितेको थियो।
१० वर्ष लगातार शासन गरेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले १० प्रतिशत स्थान हासिल गर्न नसकेर प्रमुख प्रतिपक्ष हुने हैसियत समेत गुमाउँदै ४३ स्थानमा खुम्चिनुपरेको थियो। यसबीचमा भएका प्रदेश निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि लोकसभाका उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेसले सफलता पाएको छ। भाजपाले उपनिर्वाचनबाट लोकसभाका आठ सदस्य गुमाएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रुपमा चिनिने भारतमा शक्तिशाली नेताका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय भएपछि चुलिएका अपेक्षाहरु चार वर्षभन्दा बढीको उनको कार्यकालमा निराशामा परिणत हुँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ।
मोदीः कामदार कि नामदार?
भाषणकलामा नरेन्द्र मोदी उम्दा मानिन्छन्। जहाँ पुग्छन्, त्यहाँको मनोभावना (सेन्टिमेन्ट) बुझेर लोकप्रिय भाषण गर्नमा उनलाई अहिले सायदै कसैले भेटाउन सक्ला। जस्तो, पहिलो नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालको संसदमा बोल्दा उनले सुरुमा नेपाली बोलेर सकारात्मक वातावरण बनाए भने बाँकी भाषणमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भन्दै नेपालीहरुको मन जित्ने कोसिस गरे। उनले नेपालको प्रशंसा यति धेरै गरे कि सर्वत्र उनको बाहबाही मात्र भयो। यस्तो तरिका मोदीले अरु मुलुकमा जाँदा मात्र अपनाउँदैनन्, आफ्नै देशका विभिन्न राज्यमा जाँदा पनि उनी यस्तै शैलीमा भाषण गर्छन्। कुनै दिवंगत नेताको प्रशंसा गरेर हुन्छ कि त्यस ठाउँका लागि कुनै राहत प्याकेज घोषण गरेर हुन्छ, उनी आफ्ना श्रोताहरुको मन जित्न खप्पिस छन्।
नरेन्द्र मोदी प्रत्येक भाषण आक्रामक गर्दछन्। उनका भाषण विपक्षीहरुलाई कडा आरोप लगाउने र व्यक्तिगत रुपमा समेत आक्रमण गर्ने खालका हुन्छन्। विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई राजकुमार भन्नेदेखि गान्धी परिवारको खेदो खन्नमा उनी कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। जबकि, कसैले स्वीकारे गरे पनि, नगरे पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसँग जोडिएको गान्धी परिवारप्रति आम भारतीयहरुमा एकप्रकारको सहानुभूति देखिन्छ। सोनिया गान्धी भारतमा नजन्मेको कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउने मोदीको मुद्दा पनि अबको चुनावमा काम लाग्ने छैन। किनकि, सोनियाले कांग्रेसको नेतृत्व छाडेर राहुललाई सुम्पिसकेकी छन्।
राहुल गान्धीलाई आरोप लगाउँदा मोदीले आफूलाई कामदार र उनलाई नामदार भन्ने गर्दछन्। अर्थात् आफूले कामका लागि राजनीति गरेको तर राहुलले नामका लागि राजनीति गरेको उनले आरोप लगाउने गरेका छन्। तथ्यहरुमा हेर्दा नरेन्द्र मोदी स्वयम् चाहिँ ठूला नामदारका रुपमा देखिन्छन्। प्रचारप्रसारमा उनले गरेको सरकारी खर्चको मात्रै हिसाव गर्दा उनलाई संसारकै सबैभन्दा ठूला नामदार नेता भन्दा फरक पर्दैन। भारतीय कर्पोरेट सञ्चारमाध्यमहरुलाई उनले नियन्त्रणमा मात्र लिएका छैनन्, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत आफ्नो प्रचारका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरेका छन्। कांग्रेसले यसमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। देशभरका ठूल्ठूला सहरमा तस्वीरसहितका होर्डिङ बोर्ड, पत्रिकाहरुमा पूरा पृष्ठ विज्ञापन, हरेक महत्वाकांक्षी योजनाहरुका अगाडि प्रधानमन्त्री नाम, रकम तिरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार जस्ता कुराले उनी प्रचारका भोका छन् र जे गर्दछन्, त्यसभन्दा बढी लाभ लिन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ।
अलपत्र एजेन्डाः ब्याक फायरको खतरा
अघिल्लो निर्वाचनका बेला नरेन्द्र मोदीले भारतीय मतदाताहरुसमक्ष केही आकर्षक वाचाहरु गरेका थिए। परम्परागत ढर्राबाट चल्ने कांग्रेसले भारतमा तरक्की गर्न सक्दैन भनेर चिन्तित भारतीय मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर मोदीले रोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार निर्मूल जस्ता आकर्षक नाराहरु अघि सारेका थिए। चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर चुनावी वर्षमा प्रवेश गर्दा मोदीका ती बाचाहरु या अधुरा देखिएका छन् या त चुनावी भाषणका विषय मात्र।
कालाधन वापसीः अघिल्लो निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीले चर्को रुपमा उठाएको विषय थियो, कालो धन फिर्ता। भारतीय नागरिकहरुले विदेशी बैंकमा अवैध तरिकाले जम्मा गरेको रकम फिर्ता ल्याउने र त्यसो गर्न सक्दा प्रत्येक भारतीयको भागमा १५ लाख रुपियाँ पर्ने तथ्यांक मोदीले निर्वाचनका बेला गरेका थिए। तर, त्यस अनुरुप काम भएन। उनले एक पैसा पनि फिर्ता ल्याउन नसकेपछि विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेका भारतीयहरुलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाएर आफ्नो लाज केही रुपमा ढाक्ने कोसिस गरेका छन्। साढे छ सय भारतीय नागरिकले आफूहरुले विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गरेको खुलाएपछि त्यसैलाई सफलताका रुपमा प्रचार गर्ने मोदीको योजना देखिन्छ।
रोजगारीको संकटः भारतमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा बेरोजगारीलाई लिइन्छ। प्रतिबर्ष दुई करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचासहित सत्तामा पुगेका मोदीका लागि अहिले त्यही विषय घाँडो बनेको छ। ‘स्वरोजगारी प्रबद्र्धनलाई पनि त्यसैमा जोडेर भनेको हुँ’ भन्दै उनले बयान बदलेका छन्। भाजपा अध्यक्ष अमीत शाहले त यतिसम्म भन्न भ्याएका छन्, समोसा बेच्नेहरु पनि स्वरोजगार हुन्, तिनलाई रोजगारीमा गणना गर्नुपर्छ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले देशभित्र यो कुरा उठाइरहेका छन् र हालैको आफ्नो जर्मनी र बेलायत भ्रमणका क्रममा पनि यसैलाई भारतको जोडदार समस्याका रुपमा उठाएका छन्। यसबाट उनी आउँदो निर्वाचनमा यसलाई मुद्दा बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणः गत निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोडदार रुपमा उठाएका थिए। खासगरी, कांग्रेसका पालामा भएको टेलिकमको टु जी स्क्यामलाई उनले मुख्य मुद्दा बनाए। त्यसमा तत्कालीन दुईजना सञ्चारमन्त्री जेल परेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसमेत संलग्नताको दावी भाजपाको थियो। एक वर्ष पहिला भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार नभएको फैसला गरेपछि कांग्रेसलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने भाजपाको एक मुद्दा समाप्त भएको छ। सोनियाका ज्वाइँ रबर्ट बाड्रा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै भाजपाले चुनावी मसला बनाएको थियो। खासगरी, हरियाणामा स्काइलाइट अस्पतालका नाममा सरकारबाट जग्गा लिजमा लिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पछि भाजपाको सरकार बनेपछि न्यायिक छानबिन समिति पनि बनाइएको थियो। तर, त्यसबाट कुनै कारवाही नभएपछि यो पनि चुनावी हतकण्डा रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। बरु, फ्रान्ससँग राफेल हेलिकोप्टर किन्ने विषयमा भाजपा सरकार विवादमा फसेको छ। त्यसमा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कांग्रेसले मुद्दा बनाइरहेको छ।
फरक विचारमाथि दमन
सँगै स्वतन्त्र भएका भारत र पाकिस्तानमध्ये भारतमा लोकतन्त्र निर्वाध रुपमा चलिरहने र पाकिस्तानमा पटकपटक अवरुद्ध भइरहने मुख्य कारण भारतमा रहेको विविधता र सहिष्णुता हो भन्न सकिन्छ। भाषा, धर्म, संस्कृति र इतिहासका हिसाबले विविधतापूर्ण रहेको भारतलाई भाजपा र नरेन्द्र मोदीले विभाजित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। खासगरी, धर्मका आधारमा भोटको राजनीति गर्दै आएको भाजपाले आफ्ना विरोधीहरुको मुख थुन्नका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।
दक्षिणपन्थी कट्टरताको खुलेर विरोध गर्ने पत्रकार गौरी लंकेश, एमएम कालबुर्गी, वामपन्थी बुद्धिजीवी गोविन्द पानसरे जस्ताको हत्याले भारतीय समाजमा बढेको असहिष्णुता उजागर गर्दछ। लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीबी र नागरिक समाजका अभियन्तामाथि भएको दमन र धरपकडलाई लिएर कैयौँ लेखकहरुले आफूले विगतमा पाएका अवार्डहरु फिर्तामसेत गरेका छन्। हालै वकिल तथा अधिकारकर्मी सुधा भारद्वाज, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, कवि भारा भारा राव, लेखक अरुण फेरेरिया, लेखक भर्नन गोञ्जाल्भेज, वकिल सुसन अब्राहम, सामाजिक अभियन्ता आनन्द तेल्तुम्बडेलगायतको गिरफ्तारी त्यही असहिष्णुताको निरन्तरता हो। भारतमा चलिरहेको माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको अभियोगमा उनीहरुमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ।
यसबाट के देखिन्छ भने मोदी भारतीय समाजलाई अझै विभाजित गर्न चाहन्छन्। वाम रुझान राख्ने कवि, लेखक, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ताहरुलाई पक्राउ गरेर उनी दक्षिणपन्थी कट्टरतावादलाई बढावा दिन खोज्दैछन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, भारतीय राजनीतिमा निर्णायक मानिएको धार्मिक फ्याक्टरलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि कांग्रेस अध्यक्ष गान्धी अहिले सक्रिय देखिएका छन्। उनले जारी कैलाश मानसरोवर यात्रालाई हिन्दु मतदातासँग जोडिने अवसरका रुपमा प्रयोग गरेका छन्। हिन्दु धर्मसँग कांग्रेसले सन्तुलन कायम राख्न सक्दा भाजपालाई त्यसको सीधा घाटा हुनेछ। छिमेक सम्बन्धमा समेत असफल देखिएका मोदीलाई धार्मिक मतदाताले विश्वास कम गर्नेबित्तिकै जनाधार स्वतः कम भइहाल्छ। इन्डिया टुडे ग्रुपले हालै गरेको सर्वेक्षणले भाजपा गठबन्धनले २ सय ५५ र कांग्रेस गठबन्धनले २ सय ४८ सिट ल्याउने आँकडा देखाएको छ। यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने भाजपा र मोदीको लोकप्रियता निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
प्रकाशित १८ भदौ २०७५, सोमबार | 2018-09-03 15:21:27